MADAXWEYNAHA GALMUDUG OO SHEEGAY INUU CABSI GELIYAY SAFARKA UU JAWAARI KU TAGEY DHUUSAMAREEB - shumis.net
→ MADAXWEYNAHA GALMUDUG OO SHEEGAY INUU CABSI GELIYAY SAFARKA UU JAWAARI KU TAGEY DHUUSAMAREEB MADAXWEYNAHA GALMUDUG OO SHEEGAY INUU CABSI GELIYAY SAFARKA UU JAWAARI KU TAGEY DHUUSAMAREEB galmada Net
C/kariin Xuseen Guuleed, Madaxweynaha Maamulka Galmudug, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in baqdin uu ku beeray booqashadii uu Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya, uu Khamiistii ku tagey Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Cadaado, ayaa si xoogan u dhaliilay Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ka dib markii uu sheegay inaanu ku soo wargelin socdaalkiisa Dhuusamareeb.
“Waxaan dareen ka muujinaynaa booqashada iyo safarka Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya, Mudane Maxamed Cismaan Jawaari uu ku yimid Magaalada Dhuusamareeb, asagoo wax wada tashi ah uu kala yeeshay dadka ay khuseyso aysan jirin.” Ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Madaxweynaha, ayaa yiri “Waxaan u aragnaa safarkaasi inuusan u adeegeynin nabadda, wada hadalka iyo wada hadashiinta socotay ee u dhaxeysay Dowlad Goboleedka Galmudug iyo Maamulka Ahlu Suna Waljameeca. Waxaan runtii u aragnaa wada hadaladaasi inay carqalad ku yihiin.”
Waxa kaloo uu yiri “Waxaan u aragnaa inuu safarkaas carqalad ku yahay guud ahaan geedi socodka, wadatashiga madasha Magaalada Kismaayo 10-ka bisha loogu ballansan yahay. Waxaan aaminsanahay in ujeedooyin qarsoon uu safarkaasi ka dambeeyo, aad iyo aad aan runtii uga xunahay Gudoomiyaha Baarlamaanka oo ah Masuul aad iyo aad u sareeya oo Masuuliyiinta dalka ka mid ah.”
Isagoo hadalkiisa sii wata, ayaa waxaa uu yiri “Intii uu dadka Somaliyeed isu soo dhawaanshahooda, nabadooda iyo xasiloonidooda ka shaqayn lahaa, in runtii ay u muuqato tallaabooyinkiisa iyo hawlahiisa kuwo carqalad ku ah nabadda iyo xasiloonida dalka.”
Guuleed, ayaa intaa ku daray “Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa Baarlamaanka Federaalka Somaliya inuu arrimaha noocaasoo kala ah uu ka diggo. Waxyaabaha aan xitaa cabsida ka qabno ka midda arrimaha noocaasoo kala ah inay khatar ku keenaan, in Hay’adaha Dowliga ah ee jira, gaar ahaan kan Baarlamaanka naftigiisa ay ku keenaan kala qaybsanaan iyo kala ra’yi duwanaan, aad iyo aad u xoog badan iyo carqalad ay ku keenaan wadatashiga Dowladda Somalida ay wado.”